Manatsara ny fitarihana sy fitetezana ny iOS 15 amin'ny fampidirana sary sy lahatsoratra | Vaovao IPhone
Ny drag and drop dia mety ho iray amin'ireo safidy iOS mahaliana indrindra ananantsika. Ny fahaizan'ny fahaizana mifampiresaka amin'ny singa samihafa eo amin'ny fampiharana dia iray amin'ireo andry fototra amin'ny fahamendrehan'ny miasa rafitra. Ankoatr'izay, tamin'ny fahatongavan'i iOS sy iPadOS 15 Apple dia te-handeha lavitra kokoa amin'ny fanitarana ny tombotsoan'ny Drag and Drop. Manomboka izao, afaka mifandray amin'ny antontan-taratasy, sary, lahatsoratra amin'ny fomba tokana na marobe eo anelanelan'ny fampiharana samihafa isika. Ho fanampin'izany, ny atiny voafantina dia mety ho avy amin'ny fampiharana samihafa ary raha miaraka amin'ny rantsan-tànana iray isika dia mifandray amin'ny atiny, miaraka amin'ny tanana iray hafa afaka manao fihetsika isika.
Io no fiasa notsoahana sy fitetezana nohatsaraina tao amin'ny iOS 15
Miaraka amin'ny fanohanana ny fisintomana sy ny fitetezana ny rindranasa, azonao atao ny misafidy sary, antontan-taratasy ary fisie amin'ny rindranasa iray ary hisintona azy ireo mankany amin'ny iray hafa.
iOS 15 dia nanatsara ny safidy Drag and Drop efa misy ao amin'ny iOS 14. Ny zava-baovao dia mitoetra singa mihamitombo ahafahantsika mifandray. Ankehitriny isika dia afaka mampiditra saika izay atiny misy amin'ilay fiasa: sary, lahatsoratra, horonan-tsary, antontan-taratasy, sns. Ho fanampin'izay, afaka mampiasa fampiharana isan-karazany isika hisafidianana singa samihafa ary hametraka azy ireo ho azy.
Mba hanaovana izany, dia hifantina ny singa voalohany amin'ny rantsantanana isika ary hihazona azy. Amin'ny lafiny iray hafa afaka mampiasa fihetsika multitouch isika hanovana fampiharana. Rehefa tafiditra ao anaty fampiharana hafa ianao dia mbola miaraka amin'ny rantsan-tànanao miaraka amin'ilay singa voalohany voafantina, afaka misafidy singa bebe kokoa isika ary rehefa avoakanay, izy ireo dia hanaraka ny singa voalohany voafantina amin'ny endrika stack.
Ary koa, hamita ny hetsika afaka miditra amin'ny rindranasa aleha izahay Aiza fotsiny isika no mijanona amin'ny tsindry, azontsika avela ny antontan-taratasy rehetra, horonan-tsary, sary na fisie arakaraka ny fampiasana izay homentsika azy. Ity fanitarana fiasa vaovao ity mamela ny vitamina iOS 15 hametaka singa amin'ny fampiharana samihafa ao amin'ny mailaka anay, ohatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 15 » Ny iOS 15 dia manatsara ny asan'ny 'drag and drop' amin'ny alàlan'ny fampidirana sary sy lahatsoratra